မီးမီးကိုလုပ်တာ ကိုကိုနှင့်ညီညီဖြစ်ကြောင်း၊ အောင်ကြီးကိုမသိဟု ကာယကံရှင် ဗစ်တိုးရီးယားကလေးငယ်က ဓာတ်ပုံရွေးထုတ်ပြနေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို တရားရုံးလက်ခံ - Yangon Media Group
မီးမီးကိုလုပ်သူမှာ ကိုကိုနှင့် ညီညီဖြစ်ကြောင်း၊ အောင်ကြီးကို မသိဟု ကာယကံရှင် ဗစ်တိုးရီးယား ကလေးငယ်က ဓာတ်ပုံရွေး ထုတ်ပြ နေသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို တရားရုံးကို တင်ပြခဲ့ရာ လက်ခံခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဩဂုတ် ၁၄ ရက် နေပြည်တော်၊ ဒဏ္ခိဏခရိုင်တရားရုံး၌အမှု စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းတွင် တရားလို ပြသက်သေအဖြစ် စစ်ဆေး သည့် ကလေးငယ်၏ ဖခင်ဖြစ်သူက အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ကို သက်သေ အဖြစ်တင်သွင်းခဲ့ခြင်းကို တစ်ဘက် ဥပဒေအရာရှိက ကန့်ကွက်ခဲ့သော် လည်း ယင်းဗီဒီယိုဖိုင်ပါဝင်သည့် ဖုန်းကို သက်သေခံအဖြစ် လက်ခံ ပြီးသားဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးဆုံး ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါသက်သေတွင် ဆရာမ နှင်းနု၊ အောင်ကြီး၊ ကျောင်းကြီး ကြပ်ရေးမှူး ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်၏ သား နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုကို၊ ညီညီတို့၏ ဓာတ်ပုံ၊ ကိုကိုနှင့်ညီညီ နှစ်ယောက် တွဲဓာတ်ပုံငါးပုံကိုရွေးထုတ်ပြီး ဗစ် တိုးရီးယား ကလေးငယ်က ပြနေ သည်ကို ဖခင်ဖြစ်သူက ဖုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးထားသော ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ် သည်။
အောင်ကြီး၏ ရှေ့နေ၊ တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်စုဒါလီ အောင်က “ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ ဓာတ်ပုံ ငါးပုံချပြတယ်။ တစ်ပုံက နှင်းနု၊ တစ်ပုံက ကိုကို၊ တစ်ပုံက ညီညီ၊ နောက်တစ်ပုံက အောင်ကြီးပေါ့။ နောက်တစ်ပုံက ကိုကိုရယ်၊ ညီညီ ရယ်ပါတဲ့ပုံ။ အကုန်လုံး ငါးပုံချပြ တဲ့အခါ ကလေးက ငါးပုံထဲကမှ အောင်ကြီးကို မသိလို့ပြောတယ်။ မီးမီးကိုလုပ်တာ ကိုကိုနဲ့ညီညီလို့ ပြောတယ်။ သူတို့ကို သတ်ပစ်ချင် တယ်လို့ ခဲတံနဲ့ထိုးတယ်ပေါ့။ ဖေဖေ ခြေထောက်နဲ့ ကန်ပေးလို့ပြောတယ်။ သူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ အဲ့ဒါ တွေ တွေ့ရတယ်။ ဒီထဲမှာလည်း တီချယ်နှင်းနု ပါလား မေးတယ်။ ပါတယ်လေ။ တီချယ်နှင်းနုက မီးမီးကိုဆူတဲ့အထဲမှာ ပါတယ်ပြော တယ်” ဟု မီဒီယာများ၏မေးမြန်း မှုကို ဖြေကြားသည်။
သက်သေခံတင်ပြခဲ့သည့် အမှု မှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့ ရာနှုန်းပြည့်ယုံ ကြည်မှုရှိကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
အောင်ကြီး၏ရှေ့နေတစ်ဦး ဖြစ်သူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က “ဒီကနေ့က တော့ နစ်နာတဲ့ကလေးရဲ့အဖေကို စစ်ပါတယ်။ လိုပြ(၂)အနေနဲ့ စစ် တယ်။ စစ်တဲ့နေရာမှာတော့ တရား လွှတ်တော်ရှေ့နေ ဒေါ်စုဒါလီအောင် က စစ်ပါတယ်။ ကလေးအဖေက လည်း အချက်အလက်အသစ်တွေ တင်လာတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ကျွန် တော် အတော်အားရစရာရှိတယ်။ အစွပ်စွဲခံရတဲ့ အောင်ကြီးတင်မက ဘူး။ ကလေးက ဘယ်သူတွေကို ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာ ထိုးပြတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေ ပေါ်လာတယ်။ တ ခြား တော်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာကိစ္စ တွေ၊ အချက်အလက်တွေဆိုတာက ကလေးအဖေက တယ်လီဖုန်းမှာ မှတ်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းတွေပေါ့။ အဲ့ဒါတွေကို ရုံးကိုတင်ပြတာပေါ့။ ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို သက်သေခံတင် သွားတယ်ပေါ့။ အဲဒီဖိုင် နှစ်ဖိုင်ကို တရားသူကြီးက လက်ခံပါတယ်။တရားသူကြီးက ဖုန်းကသက်သေ ခံဝင်ပြီးသား၊ ဖုန်းထဲမှာ ရှိသမျှ လည်း သက်သေခံဝင်တယ်ပေါ့ “ ဟု မီဒီယာများ၏မေးမြန်းမှုကို ဖြေကြားသည်။
ယနေ့ရုံးချိန်းတွင် ဝန်းရံသူ ပြည်သူအချို့ လာရောက်ခဲ့သေး သည်။
လာမည့်စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် နေ့တွင် ဗစ်တိုးရီးယားကလေး ငယ်ကို ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်အသုံးပြု ကာ စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည့် နေပြည် တော်၊ သပြေကုန်းရပ်ကွက်ရှိ Wisdom Hill ပုဂ္ဂလိကမူကြိုကျောင်း တွင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် အသက် သုံးနှစ်ခန့်အရွယ် မူကြိုကျောင်း သူတစ်ဦး ပြီးခဲ့သည့် မေ ၁၆ ရက် က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွယ်မရာပြု လုပ်ခြင်းခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ အမှုမှ တရားခံဟု စွပ်စွဲခံ ယာဉ်မောင်း အောင်ကျော်မျိုး(ခ) အောင်ကြီးကို ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့က နေပြည်တော်၊ ဒဏ္ခိဏခရိုင်တရား ရုံးတွင် မုဒိမ်းမှုပုဒ်မ-၃၇၆ ဖြင့် တရားစွဲတင်ခဲ့ပြီး အမှုတွင် တရား လိုပြသက်သေ ၂၆ ဦးတင်ပြထား သည်။
မင်္ဂလာဒုံ ဥယျာဉ်မြို့တော်တွင် ဇေကမ္ဘာနှင့် တရုတ်ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းပြီး Yangon Mingalardon Grand Bazaar တည်ဆော??
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေ ကျပ် သုံးဘီလီယံခန့်ြ??
ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရာတွင် အဆင်ပြေရန် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ လုပ်အားေ